अमेरिकि निर्वाचनको पूर्वानुमान र भविस्यवाणीः को बन्ला त अमेरिकाको आगामी राष्ट्रपति ? - Jhapa Online
सयोगी सृजन शर्मा
अनुमान लगाउनु र भबिस्यबाणी गर्नु उस्तै उस्तै भए पनि तेस्मा भएको भिन्नता के हो भने अनुमान लगएको बिषय सही साबित न हुन पनि सक्छ तर भबिस्यबाणी गर्ने हरुले त्यो सत्य हुने सत प्रतिशत दावा गर्ने गर्छन् । जस्तो कि सम्पूर्ण तयारी पछी तपाईंले परिक्षा दिनु भएको छ भने तपाईंले आफु पास हुने अनुमान लगाउन सक्नु हुन्छ तर पारीक्षा फल नै न आइ पास भए भनेर दावा गर्नु भनेको भबिस्यबाणी गर्नु हो । धेरै हद समान यो कन्फीडेन्स र ओभर कन्फिडेन्स भने जस्तै हो ।
विस्वको सबै भन्दा शक्तिसाली मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपतीको चुनावको माहोल एकदम तातीएको छ । उक्त चुनावमा रिपब्लिकन पार्टी बाट बर्तमान राष्ट्रपती डोनल्ड जे ट्रम्प मैदानमा छन भने अर्का प्रत्यसी जो बाइडेन डेमोक्राटिक पार्टीका तर्फ बाट मैदानमा छन । चुनाव कस्ले जित्छ भनेर अहिलेनै भन्नु हतार हुन सक्छ तर सन २०१६ मा जस्तो बर्तमान राष्ट्रपतीको पक्षमा रहेको लहार घटेको सामाजिक सन्जाल मार्फत सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ यध्यपी चुनाव अनुमानले जित्ने न भएर अमेरिकि जनताले गर्ने मतदानले हो । अमेरिकामा कुल खसेको मत बहुमतले मात्र राष्ट्रपती बन्न प्र्यप्त हुँदैन किन भने अमेरिकी निर्वाचनमा इलेक्ट्रल कलेजमा बहुमत प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ जस्तो कि
२०१६ मा डोनल्ड ट्रम्पकी प्रतिस्पर्दी हिल्लारी क्लिन्टनले डोनल्ड ट्रम्पले भन्दा झन्डै २८ लख भोट धेरै पाए पनि अमेरिकि राष्ट्रपती हुन सकिनन किन भने भने राष्ट्रपती बन्नका निम्ती ५० वटै राज्यको इलेक्ट्रोरल कालेजको सन्ख्याको बहुमात इलेक्ट्रोरल कालेजमा अनिबर्य रुपमा बिजइ हुनु पर्ने हुन्छ जहाँ हिल्लरी क्लिन्टन चुकेको थिन ।
अमेरिकामा हुने राष्ट्रपतीको चुनावले विस्वको ध्यान तन्ने गर्छ । संसार भरीका धेरै देश प्रतीको धारणा अमेरिकामा चुनिने राष्ट्रपतीले निर्धारण गर्ने गर्छन् तेसैले यहाँ अमेरिकामा हुने राष्ट्रपतीको चुनावले विस्वको प्रतेक मुलुकलाई आम्सिक रुपमा प्रभाब पर्छ नै । बर्तमान अमेरिकि राष्ट्रपतीको सार्वजनिक अबिब्यक्ती धेरै अमेरिकि जनताले मन न परएको सामाजिक सन्जाल मा आउने उनी प्रतीकृयाले स्पस्ट हुन्छ । नेपालमापनि बर्तमान प्रधानमन्त्री खड्ग प्रशाद ओली प्रतीको सामाजिक सन्जालको धारणा नकारत्मक पाउने गरिन्छ ।
धेरै नेपाली राजनीतिक कर्मी हरुले नेपालमा राजनीतिक अभियान हरुमा अमेरिकाको उधारण प्रस्तुत गरेको सुन्न र देख्न सकिन्छ । यदी अमेरिकामा
२०२०को राष्ट्रपतीको चुनाबमा डोनल्ड ट्रम्पको पराजय भयो भने नेपालमा सरकारको नेत्रित्व गरिरहेको राजनीतिक पार्टी लाई धेरै ठुलो चुनौती आउने निस्चित छ । २०१६बाट अमेरिकाको राष्ट्रपती बने पछी डोनल्ड ट्रम्पले उल्लेखनियकाम गरेका छैनन तेस्को सट्टामा उन्ले आम संचारमध्याम हरु लाई झुटो समाचार हरु सम्प्रेशण गरेको आरोप लगाउने गर्छन । राष्ट्रपती आफ्ना अलोचक लाई सम्मान नगरि सम्बोधन गर्ने गर्छन । एस बहेक सन २०१६ को निर्वाचनको समयमा ट्रम्पको चुनाबी अभियानका केही सदस्य हरु अपराधीक पृष्ठभूमीमा संलग्न भएको पुषटी भए सँगै जैलमा छन भने ट्रम्पले लमु समय समन ट्यक्स न तिरेको डेमोक्राटिक पार्टीको आरोप सही साबित भएको छ तेस्तै उन्को चाइनामा भएको गोप्य बैंक एकाउन्ट लगायत अन्य थुप्रै करण हरुले गर्दा २०२० को चुनाब जित्न सहज् न रहेको राजनीतिक बिएस्लेसक हरुको धारणा छ । नेपालमा पनि खड्ग ओली लाई भ्रस्टचारीलाई कारबाही गर्न रोकेको कोरोना माहामारीमा प्रभाबकारीकाम न गरेको उखान टुक्का भनेर जनतालाई झुक्याउन खोजेको आरोप लग्ने गर्छ ।
भर पर्दो बिकल्प हुँदा हुँदै डोनल्ड ट्रम्पले चुनाव जिते भने अमेरिकि प्रजानतान्त्रिक अभ्यास लाई गम्भिर चुनौती आउन सक्ने राजनीतिक बिस्लेसक तथा प्रध्यापक रोबेर्ट रिचको धारणा छ । के नेपालमा, अमेरिकामा जस्तै रिपब्लिकन पार्टीको बिकल्प डेमोक्याट्स छन ???त्यस्तै सत्तारोड पार्टीको बिकल्प छ त? नेपालमा भने प्रभाबकारी राजनीतिक बिकल्प न रहेकोले आउने चुनाबमा हाल नेत्रित्व गरिरहेको पार्टी फेरीपनी राजनीतिक नत्रित्वमा कयम रहने सम्भावना बलियो राखेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
अमेरिकाका अलस्का र हवाई समेत गरी ५० वटा राज्यहरुको कुल इलेक्ट्रोरल मत संख्या ५३८ छ । जस मध्ये सबै भन्दा वढि क्यालिफोर्निया राज्यको इलेक्ट्रोरल मत ५५ छ भने टयाक्सासको ३८ र ल्फोरिडा साथै न्यूयोर्कको २९ छ । डिसिको ३ (डिसि ५० वटा राज्यहरु भित्र पर्दैैन), अलस्काको ३ र हवाईको ४ इलेक्ट्रोरल भोट छ । सन २०१६ को निर्वाचनमा कुल ५३८ मत मध्ये ट्रमले ३०६ र हिलारीले २३२ मत प्राप्त गरेका थिए ।
अमेरीकी नेतृत्वलाई विश्व नेतृत्व कै हाराहारीमा हेरिन्छ । अमेरीकी राष्ट्रिय नीतिहरुमा नेतृत्वको परिवर्तनले खासै परिवर्तन नगरे पनि नेपाल जस्ता आर्थिक सहायताका लागि पर निर्भर मुलुकहरुमा यस्को ठुलो महत्व रहन्छ । विगतमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनले नेपालका ६० प्रतिशत गफ ओगटेको भनाईहरु थिए । अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिक गठबन्धन अर्थात् इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजिक अलाएन्स संगै चीनले पनि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत आफ्नो आर्थिक र सामरिक महत्त्वाकांक्षाको विस्तार नै गर्न खोजेको छ । नेपाल बेल्ट एन्ड रोडमा हस्ताक्षरकर्ता हो । यसरी भोलिका दिनमा कुटनैतिक तथा आर्थिक रुपमा अमेरीकाबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सक्छ भन्ने कुरा नेपालको राजनीतिमा अब प्ष्ट हुनु पर्छ । किनभने नेपालका लागि नागरिक स्तरबाट हेदौ अमेरीका भारत र चिन बराबार महत्वका मित्रहर हुन र बनाउनु पनि पर्छ ।
बिर्तामोड, झापा (हाल अमेरिका)
कार्तिक २ यता कोभिडको मृत्युदर २६.११ प्रतिशत पुग्यो